VaMugabe naVaTsvangirai Vokurudzirwa Kupedza Mhirizhonga Munyika
Dare repamusoro soro rekuchengetedzwa kwenyika, reNational Security Council, rakasangana neChishanu kekutanga kuti rizeye nyaya yemhirizhonga iyo yanetsa munyika rikakurudzira kuti vatungamiri venyika vagare pasi vaumbe hwaro hwakajeka hwekupedza dambudziko iri.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, ndivo vange vari sachigaro mumusangano uyu. Vapindawo mumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, nevatevedzeri wavo vaviri Muzvare Thokazane Khupe, vatevedzeri vaVaMugabe vaviri, Amai Joice Mujuru naVaJohn Nkomo, vakuru vemauto, mukuru wemapurisa, VaAugustine Chihuri, vasori nemamwe makurukota ehurumende.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti musangano uyu wange uchikandiranwa makobvu nematete sezvo VaTsvangirai vabuda pachena kuti havasi kufara nemashoko egurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, VaEmmerson Mnangagwa, pamwe nemapurisa vari kuti ivo bato ravo ndiro riri kukonzera mhirizhonga, asi ari kukonzera mhirizhonga achizivikanwa. VaTsvangirai vati vatsigiri vavo vari kutambiswa chamutavanhava mapurisa pasina zvaari kuita.
Rimwe remakurukota ezvekudzivirirwa kwemukati menyika, Amai Theressa Makone, vati musangano weChishanu uyu wanga wakakosha sezvo zviri kuitika munyika zvisina kumira zvakanaka.
Zvichakadaro. sangano reAmnesty International rashoropodza mhirizhonga iri kuitika munyika. Mutungamiri weAmnesty International, Va Erwin Van der Boght, vanoti nhirizhonga iri kuitika inodzinga tarisiro yevanhu yanga yaunzwa nehurumende yemubatanidzo.
Mukuru weZimRights, VaOkay Machisa, vanoti vatungamiri vemapato vanofanirwa kushoropodza mhirizhonga iri kuitika munyika.
Hurukuro naVa Theresa Makone
Hurukuro naVaOkay Machisa